हामी कति सञ्चार साक्षर ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
हामी कति सञ्चार साक्षर ?
वैशाख १९, २०७६ मधु राई
काठमाडौँ — केही समययता अधिकांश मूलधारका पत्रपत्रिकाले पाठक संख्या बढाउन 'पत्रिका पढौं, पुरस्कार जितौं' भन्ने उपहार योजना अघि सारेका छन् । कतिपय पत्रिकाका बजार प्रतिनिधिहरूले घरदैलो कार्यक्रमसँगै बजार र चोकचोकमा अस्थायी स्टल थापेर पत्रिकाको बजारीकरण गरिहेका छन् ।
बजारीकरणकै लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले तेस्रो सिजन अन्तर्गत पाठकलाई करोडपति र लखपति बनाउन पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा रोड सो सुरु गरेको छ । यस्ता उपहार योजनाले पुरुष पाठकहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि महिला पाठकका लागि 'कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात' भएको छ ।
बहुसंख्यक महिला चाहे कामकाजी हुन् या गृहिणी अधिकांशको प्राथमिकतामा पत्रपत्रिका पर्दैन । बहुसंख्यक पुरुष पाठकले भने पत्रपत्रिका किनेर या मागेरै भए पनि नियमित पढ्ने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा पुरुष लक्षित र पुरुषमुखी छन्, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू भन्दा फरक नपर्ला ।
पत्रपत्रिका नियमित पढ्ने अधिकांश पुरुष पाठकले पनि विचार र दृष्टिकोण पानामा छापिएका लेख-रचनाभन्दा घटनाप्रधान समाचार नै बढी पढ्ने गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै कतिपय बौद्धिक पाठकलाई भने घटनाप्रधान समाचारले भन्दा विचार र दृष्टिकोण पानाका लेख-रचनाले आकषिर्त गर्ने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा दुवै थरीका पाठक अर्थात् महिला र पुरुषको ध्यानाकर्षण गराउनेभन्दा बढीभन्दा बढी यस्ता पुरुष पाठकको संख्या बढाउन मूलधारे पत्रपत्रिका लागिपरेको देखिन्छ, नकि महिला पाठकको ध्यानाकर्षण गराउन ।
पछिल्लो समय मूलधारे पत्रपत्रिकाका पानाहरू महिला हिंसाका समाचारले भरिएका हुन्छन् । यस्ता अधिकांश समाचार अधिकांशले नेटमै हेर्ने र पढ्ने गर्छन् भने विचार र दृष्टिकोण पाना पढ्ने महिला पाठकको संख्या नगन्य देखिन्छ । केही समययता मूलधारका पत्रपत्रिकाले महिला लेखकका विचार र दृष्टिकोणलाई पनि महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । तर महिलाले लेखेका यस्ता लेख-रचनाहरू शिक्षित महिलाकै प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
पाठक चाहे पुरुष हुन् वा महिला, नियमित पत्रपत्रिका पढ्दा हुने प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे बहुसंख्यक पाठक अनभिज्ञ देखिन्छन् । पत्रपत्रिकाले पाठकलाई सुसूचित मात्र गर्दैन, यसले पाठक र लेखकको जीवनशैली र व्यक्तित्व विकासमा विशेष प्रभाव पार्छ । व्यापार व्यवसाय बढाउने लगायत रोजगारीका लागि उर्वरभूमि बन्दैछन्, सञ्चारका विभिन्न माध्यम ।
त्यतिमात्र हैन, नियमित पत्रपत्रिकामा छापिने लेख-रचना पढ्दै आएका पाठकहरू नै लेखक बन्ने गरेका छन् । यस्तै लेख-रचना लेख्दा पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने कुरा पुरुष पाठकलाई थाहा भए पनि पढेलेखेका कतिपय महिला अझै पनि 'दिदी कति रुपियाँ दिएर छाप्नु हुन्छ, आफ्नो लेख ?' भनेर सोध्ने गर्छन् ।
नेपाली छापामाध्यम मात्रै हैन, बहुसंख्यक विद्युतीय सञ्चार माध्यमका दर्शक र श्रोताले पनि पुरुषहरूलाई मात्रै ध्यानमा राखेर सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ । अधिकांश समाचार लगायत सूचना र अन्तर्वार्ताका नियमित दर्शक र श्रोता भनेका पुरुष नै हुने गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ ।
यसो भनिरहँदा भारतीय टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने टेलिशृंखलाका नियमित दर्शक भने नेपाली महिला नै छन् भन्दा दुईमत नहोला । यस्ता टेलिशृंखलाले नेपाली महिलालाई ज्ञान र सीप सिकाउनुभन्दा सस्तो मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता टेलिशृंखला नियमित हेर्ने अधिकांश हुनेखाने र शिक्षित महिलाहरूको दिनचर्या कस्तो खाने र कस्तो पहिरन लगाउने भन्नेमै बित्ने गरेको छ ।
महिला होस् वा पुरुष अझै पनि अधिकांश शिक्षितको दैनिकीमा पत्रपत्रिका पर्दैन । यसका धेरथोर कारण केलाउँदा स्वयं सञ्चार माध्यमहरू पनि दोषमुक्त भने देखिंँदैनन् । सञ्चारका विभिन्न माध्यमले अझै पनि महिलाहरूको रुचिलाई ध्यानमा राखेर सामग्री तयार गर्नसकेको देखिँंदैन । यसो हुनुमा अधिकांश सञ्चार माध्यमको सम्पादन मण्डलमा महिला सञ्चारकर्मीहरूको नगन्य उपस्थिति हुनु पनि एक हो ।
यस्ता कतिपय कारणले महिला पाठकको रुचिलाई ध्यानमा राखी सामग्री उत्पादन भएको पाइँदैन । किन र केका लागि पत्रपत्रिका पढ्ने भन्ने विषयमा पाठकलाई साक्षर बनाउन नसक्दा सञ्चारको पहुँच सबै लिङ्ग, वर्ग र समुदायसम्म पुग्नसकेको छैन । सञ्चारको आवश्यकताबारे साक्षर बनाउन अधिकांश सञ्चारका माध्यम चुकेेको देखिन्छ । हुनेखाने शिक्षित महिलाहरू सूचना र सञ्चारबाट टाढिनु भनेको आफ्ना छोरी र बुहारीहरू सूचना र सञ्चारको पहुँचबाट टाढिनु हो । सूचना र सञ्चारबाट टाढिनु भनेको त्यस क्षेत्रबाट पुग्ने प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे पाठक, श्रोता र दर्शक अनभिज्ञ हुनु हो ।
आजको युग सूचना र सञ्चारको युग हो भनेर सुन्दै-पढ्दै आएको दशकौं बितिसक्दा पनि बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा त्यति धेरै अध्ययन, अनुसन्धान भएको देखिंँदैन । केही समय अघि 'नेपाल मिडिया सर्वेक्षण २०१९' अनुसार ९१ प्रतिशत नेपालीको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ भने तीमध्ये आधाले स्मार्टफोन बोक्ने गरेका छन् ।
यस्तै ८८ दसमलव ३ प्रतिशतको फेसबुक खाता छ भने ३४ दसमलव ४ प्रतिशतले युट्युब नियमित हेर्ने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यसरी सूचना र सञ्चारको सहज पहुँच भए पनि सञ्चार साक्षरताकै कमीले कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे बहुसंख्यक नेपाली अनभिज्ञ छन् । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोगले समाजमा विकृति र विसंगति भित्रिँदैछ भन्ने समाजशास्त्रीहरूको ठहर छ । बहुसंख्यक फेसबुक र युट्युब प्रयोगकर्ताले व्यक्ति र समाजलाई चाहिने सूचना कसरी ग्रहण गर्ने र प्रवाह गर्नेभन्दापनि व्यक्ति केन्दि्रत सामग्री हेर्ने तथा प्रवाह गर्नेगरेको देखिन्छ ।
सञ्चारको सुविधा पाए पनि सञ्चार साक्षरताकै कमीले सञ्चारको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ । पछिल्लो समय महिला हिंसासँगै अन्य आपराधिक घटना बढ्नुका थुप्रै कारणमध्ये स्मार्ट फोनको दुरुपयोग पनि एक हो भन्दा फरक नपर्ला । विकसित मुलुकहरूमध्ये क्यानडाले १४ वर्ष मुनिकालाई ल्यापटप लगायत मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको धेरै भइसक्यो भने हङकङमा फेसबुकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । बि्रटिस सरकारले पनि सञ्चार निगरानी थाल्ने समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सञ्चार माध्यमहरूले विशेषगरी छापाले पाठक संख्यामा बढोत्तरी गर्न 'पत्रिका पढौं, पुरस्कार जितौं' भन्नेजस्ता उपहार योजनासँगै सञ्चार साक्षरता बढाउन विशेष अभियान थाल्न जरुरी छ । यसका लागि अस्मिता महिला प्रकाशनगृहले सन् २००५ मा शुरू गरेको एकवर्षे सञ्चार साक्षरता अभियान जस्तै मूलधारे पत्रपत्रिकाले पनि अभियान थाल्न जरुरी छ । शिक्षक मासिकले पनि बेलाबेला विभिन्न विषयमा प्रतियोगितात्मक लेख-रचना लेख्न लेखकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ । मूलधारे पत्रपत्रिकाले पनि नयाँ पाठक विशेषगरी युवा र महिलाको रुचिलाई ध्यानमा राखी सञ्चार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न जरुरी छ ।
सञ्चार माध्यमहरूले बेलाबेला किन पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्ने भन्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । स्कुले जीवनमै पत्रपत्रिका पढ्दाको प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे थाहा पाएका नियमित पाठकहरूलाई उपहार योजनाले भन्दा गहकिलो विषय-वस्तुले बढी आकषिर्त गर्छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरूले बुझ्न जरुरी छ । यी र यस्ता आधारभूत कुराह सञ्चार माध्यमहरूले बेलैमा बुझ्नसके यस्ता उपहार योजनाहरूको आवश्यकता पर्दैन ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७६ ०८:१९
ओझेल पर्दै ३मीटु
वैशाख ४, २०७६ मधु राई
काठमाडौँ — प्रा ध्यापक कृष्णबहादुर भट्टचन यौन दुर्व्यवहारको भुमरीमा परेयता जनजाति समुदाय र जातीय संघसंस्थालाई नराम्रो झट्का लागेको हुनुपर्छ । किनभने, आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई पहिचानसँग जोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने थोरै जनजाति बुद्धिजीवीमध्ये पर्छन् उनी ।
जनजातिका मुद्दालाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेबारे उनको योगदान अपरिहार्य देख्छ जनजाति समुदायले, अझै पनि । तथापिआफ्ना अगुवा यौन दुर्व्यवहार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा परेको विषयलाई लिएर आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका बुद्धिजीवीहरूबीच केकस्तो छलफल भयो या भएन, सार्वजनिक नहुनु आश्चर्यजनक छ ।
चैत अन्तिम साता यस्तै अर्को घटनाबारे ‘काठमान्डु पोस्ट’ मै समाचार छापियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आठ वर्षअघि छात्राहरूलाई परीक्षा हलभित्रै प्राध्यापकद्वय प्रवीणकुमार झा र दीपेन्द्रकुमार गुप्ताले यौन दुर्व्यवहार गरेको त्यो समाचारमा उल्लेख थियो । त्यति बेला ती परीक्षार्थीहरूले भोगेको पीडा र न्यायका लागि गरेको संघर्षलाई समाचार समेटिएको थियो ।
भट्टचन, झा र गुप्ताहरू आफूमाथिका आरोप मनगढन्ते हुन् भन्दै पन्सिन खोजेका छन् । उनीहरूले यसलाई आफूहरूको व्यक्तित्व धराशायी बनाउने प्रपञ्च भन्दै खण्डन गरेका छन् । तर उनीहरूले सायदै सोच्न सक्छन्, आफू यौन दुर्व्यवहारमा परेका घटनालाई सार्वजनिक गर्ने आँट जुटाउनुअघि महिलाले धेरै मानसिक तनाव झेल्नुपर्छ भनेर । उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेका छात्रासम्मले लोकले विश्वास गर्ला–नगर्ला भन्ने त्रासबीच आफ्नो पीडा सार्वजनिक गरेपछि विषम परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । रहर होइन यो । अर्कातिर, कार्यस्थल वा विश्वविद्यालय परिसरमा यौन दुर्व्यवहारमा परेकाहरूले तत्काल गुनासो गर्ने संयन्त्र नहुँदा पीडितहरू दोहोरोतेहरो अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय हलिउडदेखि बलिउड हुँदै भित्रिएको मीटु अभियानले नेपाललाई पनि छोइरहेको छ । हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले यस सम्बन्धी धेरथोर समाचार र लेखहरू जनसमक्ष ल्याउँदै छन् । यस्ता विषयमा खोजमूलक सामग्री जनसमक्ष ल्याउनु पत्रकारिताको मूल धर्म पनि हो ।
तर, नेपाली भाषाका मूल धारे पत्रिकाहरूमा यसले ‘काठमान्डु पोस्ट’ मा झैं प्राथमिकता नपाउनु चाहिँ सुखद होइन ।
बहुसंख्यक नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले, चाहे छापा होऊन् या विद्युतीय, यौन दुर्व्यवहारका विषयमा घटनाप्रधान समाचारलाई मात्र प्राथमिकता दिने पुरातन प्रवृत्तिले गर्दा आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । अन्यक्र मीटुमा डामिएका व्यत्तिहरूबारे थप अध्ययन–अनुसन्धान हुन्छ, भइरहेको छ । हामीकहाँ भने यस्ता कुरा केही दिनमै सेलाउने गरेका छन् । यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा मीटु अभियानले त्यति गति लिन सकेको छैन ।
फेरि, यो यौन दुर्व्यवहारको मात्र कुरा हैन, पुरुषहरूको प्रवृत्तिबारे चियोचर्या हो । पछिल्लो समय यस्तो प्रवृत्ति भएका जुनसुकै समुदाय र वर्गका व्यक्तिले महिलालाई वस्तु सम्झेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति पितृसत्तात्मकताबाट यति लादिएको हुन्छ, यसले महिलाको विद्वत्तालाई सधैं नकारिरहन्छ । समाजका अघिल्तिर बाहिरी मनले महिलाको प्रशंसा गरे जस्तो गर्ने, भित्रभित्र चाहिँ अपेक्षित स्थान नदिने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले नै हाम्रो समाजलाई पाषाण युगतिरै फर्काउने दुश्चेष्टा गरिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति मानव सभ्यताको बाधक हो । यस्तै प्रवृत्ति भएका पुरुषहरूका कारण महिला हिंसाका घटनाले पराकाष्ठा नाघ्दै गएका हुन् । यस्ता पुरुषहरू जति नै शिक्षित र सम्पन्न भए पनि समाज कालो दागका रूपमा रहने गर्छन् । मानवताविरोधी कार्य गर्ने यस्ता पुरुष जुनसुकै वर्ग, धर्म वा समुदायको भए पनि उसबाट मुलुकले कुनै लाभ पाउन सक्दैन ।
पछिल्लो समय कछुवाकै गतिमा भए पनि धेरथोर महिलाले कलमको खेती गर्न थालेका छन् । कतिपय यस्ता कलमजीवी महिलाहरूले यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लेख्न र बोल्न थालेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले देश–विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरसमेत पाएका छन् । मानवताविरोधी कार्य गर्ने त्यस्ता विद्वान्हरूका बारेमा महिला कलमजीवीहरूले लेख्नु र बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको एक प्रकारले विकासको गति अवरुद्ध हुनु हो । किनभने विकसित मुलुकमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अवसर पाएका अधिकांश विद्वान्–विदुषी आफ्नो मुलुक पनि समृद्धिको पथमा हिँडेको हेर्न चाहन्छन् ।
प्राज्ञिक क्षेत्रमा भइरहेको यौनहिंसाका घटनाबारे मूलधारका अन्य सञ्चार माध्यमले पनि थप अनुसन्धानमूलक सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण गर्न जरुरी छ । यस्ता घटनामा मुछिएका व्यक्तिलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन तीनै तहका सरकारले पहल गर्नु पनि अत्यावश्यक छ । सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरलाई यौन दुर्व्यवहारमुक्त क्षेत्र बनाउन विशेष संयन्त्र बनाई पुरुषहरूलाई सचेत गराउन जरुरी छ । महिला हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न सके मात्र समृद्धि र विकासले गति लिन्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ ०७:४६
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम
विश्वविद्यालय र विद्यावारिधि
घरघरमा पाइप लाइन
कक्षाकोठामै गोडमेल र बढारकुँढार
त्रिविको रातो पिर्का
सम्पादकीय असार २७, २०७६
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन बीस वर्षा पार गरेको दिन कीर्तिपुरको वर्षे हिलामा रातो कार्पेट बिछ्याएर कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयको मैदानमा पिर्कामाथि उभ्याएर...
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम असार २७, २०७६
राज्य शासनका प्रमुख प्राधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्, ‘मलाई अनभिज्ञ राखियो । म भ्रममा परेंँ । गुमराहमा पारिएँ ।’ प्रसंग हो, भारतबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादी...
मधुसूदन दाहाल असार २७, २०७६
केही समययता विश्वविद्यालयहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै आएका छन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको छविमाथि नै प्रश्न उठाउने विभिन्न विषयका समाचार पत्रिकाका अग्रस्थानमा आउन थालेका छन् । चिन्ताजनक विषय...
श्याम गोयन्का असार २७, २०७६
विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तन मानवजातिको चुनौती बनेको छ । कार्बनजन्य ग्यासको अतिशय उत्सर्जनले विश्व तापमान वृद्धि गरिरहेछ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, नेपालले, औद्योगिक देश...
मधु राई असार २७, २०७६
मेरो आठवर्षे नाति हरेक शनिबार मलाई भन्ने गर्छ, ‘खोइ त होउ मुमा, काम दिनु न हामीलाई !’ छुट्टीको दिन नाति आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर कहिले फोहोर छुट्याउने, कहिले...